Hiob 24 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Hiob anoyi no ntoaso (1-25)
‘Adɛn nti na Onyankopɔn nhyɛɛ bere ntoo hɔ?’ (1)
Ɔkae sɛ Onyankopɔn pene nsɛmmɔnedi so (12)
Abɔnefo pɛ sum (13-17)
24 “Adɛn nti na ade nyinaa so Tumfo no nhyɛɛ bere ntoo hɔ?+ Adɛn nti na wɔn a wonim no no nhuu ne da* no? 2 Nkurɔfo piapia ahye;+Wowia nguan kogu wɔn mmoa adidibea. 3 Wogye nnyanka mfurum,Na sɛ wɔma akunafo bosea a, wogye wɔn nantwi de si awowa.+ 4 Wopia ahiafo fi kwan so;Asaase so mmɔborɔwafo de wɔn ho sie wɔn.+ 5 Ahiafo hwehwɛ aduan te sɛ nea sare so afurum+ nenam pɛ aduan no;Wɔhwehwɛ aduan wɔ anwea pradadaa so ma wɔn mma. 6 Nkurɔfo afuw mu na wotwa nnɔbae,*Na abɔnefo bobefuw* mu na wɔsesaw nnɔbae ase. 7 Adagyaw na wɔde da, wonni ntama;+Wonni biribiara a wɔde kata wɔn ho wɔ awɔw mu. 8 Osu a ɛtɔ wɔ mmepɔw so fɔw wɔn;Ofi* a wonni nti, wɔtetare abotan ho. 9 Abɔnefo hwim agyanka fi nufu ano;+Sɛ wɔma ahiafo bosea a, wogye wɔn ntama de si awowa,+ 10 Na ɛma ahiafo no de adagyaw nantew a wonni ntama,Na wɔde ɔkɔm soasoa hwiit* a wɔakyekyere no atifi atifi. 11 Abo mu na wɔyɛ adwuma awia ketee;*Wotiatia bobe so wɔ amoa a wokyĩ nsã wom mu, nanso osukɔm de wɔn.+ 12 Wɔn a wɔrewu no penepene wɔ kurow no mu;Wɔn a wɔapira pira bɔne no* su hwehwɛ mmoa,+Nanso Onyankopɔn mmu no adebɔne.* 13 Nkurɔfo bi wɔ hɔ a wɔtew atua tia hann;+Wonhu n’akwan,Na wɔnnantew n’akwan so. 14 Owudifo sɔre anɔpa;Okum mmɔborɔwa ne ohiani,+Na edu anadwo a, ɔbɔ korɔn. 15 Nea ɔwaresɛefo ani retwɛn ara ne sɛ esum bɛba anwummere,+Ɔka sɛ: ‘Obiara renhu me!’+ Na ɔkata n’anim. 16 Akorɔmfo bu* nkurɔfo dan kɔ mu anadwo;Edu awia a, wɔto wɔn ho pon mu. Wonnim ade a wɔfrɛ no hann.+ 17 Efisɛ anɔpa ne sum kabii nyinaa yɛ pɛ ma wɔn;Wonim nneɛma a ɛyɛ hu a ɛkɔ so wɔ sum kabii mu. 18 Nanso nsu twe wɔn kɔ ntɛmntɛm.* Nnome bɛka wɔn asaase a wɔte so.+ Wɔrensan nkɔ wɔn bobe mfuw mu bio. 19 Sɛnea ɔhyew ne ɔpɛ ma sukyerɛmma a anan yow no,Saa ara na Ɔdamoa* fa wɔn a wɔayɛ bɔne no kɔ!+ 20 Ne maame* werɛ befi no; mmoawa bedi ne nam. Wɔrenkae no bio.+ Na amumɔyɛ bebubu sɛ dua. 21 Ɔbea a ɔnwo* no, ɔyɛ no basabasa,Na ɔteetee okunafo. 22 Onyankopɔn de* ne tumi beyi ahoɔdenfo afi hɔ;Wɔbɛsɔre, nanso sɛ wɔbɛtena nkwa mu oo, wɔrentena nkwa mu oo, wonnim. 23 Onyankopɔn ma* wonya ahotoso na wonsuro hwee,+Nanso n’ani wɔ nea wɔyɛ biara so.*+ 24 Wɔkɔ wɔn anim wɔ abrabɔ mu, nanso ɛnkyɛ na wonni hɔ bio.+ Wɔte sɛ hwiit* mmɛtem a wɔatwa aboaboa+ ano;Wɔbrɛ wɔn ase, na wowu te sɛ obiara. 25 Afei hena na ɔbɛka sɛ meyɛ ɔtorofo?Na hena na ɔbɛka sɛ asɛm a mereka no nyɛ nokware?”
^ Kyerɛ sɛ, Onyankopɔn atemmu da.
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Mfuw mu na wotwa mmoa aduan.”
^ Anaa “Guankɔbea.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Wokyĩ ngo wɔ wɔn afasu mu.”
^ Anaa “wɔn a wɔapirapira wɔn pira bɔne no akra.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Onyankopɔn mfa ho sobo mmɔ obiara.”
^ Nt., “tutu.”
^ Nt., “Ne ho yɛ hare wɔ nsu ani.”
^ Nt., “Awotwaa.”
^ Anaa “Obonin.”
^ Nt., “Ɔde.”
^ Nt., “Ɔma.”
^ Nt., “n’ani wɔ wɔn akwan so.”